सरकार ठेगानमा नआए कांग्रेस सडकमै सडकमा आउँदै गर्दा धेरै खुसी लागेको छैन। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। अगाडीका दिनहरु कस्तो हुन्छन्? हामी कसैले पनि भन्न सक्दैनौं। तर पनि सडकमा आउन बाध्य भएका छौं। सरकार संसदबाट भाग्यो। बालुवाटारको दुलोभित्र लुकेको सरकार र बढारिएको सरकारलाई ललकार्नका लागि कांग्रेस सडकमा आएको छ। सडकमा आएको कांग्रेस अब घर फर्केर जाँदैन। सोमबार, मंसिर २९, २०७७
किसानको पैसा दिलाउन नसक्ने सरकारले कपाली तमसुक किन गर्नु? यसअघि पनि हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर हामीले स्मरणपत्र बुझाएका थियौँ। छठसम्म पैसा दिन हामीले भनेका... सोमबार, मंसिर २९, २०७७
'केही कमरेडहरुको व्यग्र सत्तामोहका कारण संकट निम्तिएको छ' मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरुको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ। गतः भदौ २६ गते पनि कमरेडहरुले पार्टीलाई यस्तै सङ्कटबाट सकुशल अवतरण गराउन... आइतबार, मंसिर २१, २०७७
छोरी मान्छे के नारीहरुले वेद पाठ गर्न सक्दैनन्? के नारीहरुले गायत्री मन्त्र भन्न सक्दैनन्? यो कदापि होइन। पुरुषहरू भन्दा बढ्ता सक्छन् र सकिरहेका... शनिबार, मंसिर २०, २०७७
यसरी जितेँ स्तन क्यान्सर ३२ वर्षकाे हुँदा मलाई क्यान्सर लागेको थाहा भयो। त्यतिबेला ममा कुनै पनि लक्षण थिएन। बाहिरी रूपमा पूर्ण रूपमा स्वस्थ थिएँ। तर त्यसपछि... आइतबार, मंसिर १४, २०७७
परदेशकी दिदी नेपालबाट आएको दुई वर्ष जति भयको रहेछ। एउटा सानो सुपरमार्केटमा काम गर्नु हुँदोरहेछ। जुन मार्केटको मालिक भारतीय रहेछन्। व्यापार राम्रो... आइतबार, कात्तिक ३०, २०७७
कम्युनिस्ट बिग्रेपछि टाढासम्म गन्हाउँछ त्यसबेलाको प्रचलन अनुसार अतिथि सत्कारको जिम्मेवारी हेटौंडा नगरपालिकाले लिएको थियो। राममबहादुर खड्का नगरपालिकाको प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ... शनिबार, कात्तिक २२, २०७७
कोरोना अनुभव : यथार्थ र भ्रम मास्कको उचित प्रयोग गरौं। सौर्य कान्ति योगा सबैले गरौं। स्वास्थ्य अनुशासन कायम गर्न काम निकालेर हिड्ने बानी नियन्त्रण गरौं। सबैभन्दा... शुक्रबार, कात्तिक २१, २०७७
'नेकपालाई अब भगवान्‌ले मात्रै बचाउन सक्छन्' आफ्नो अकर्मण्यता, अलोकप्रियता र असफलताको बोझले दलदलमा भासिएको नेकपालाई उनीहरूको विश्वास र भरोसा नभएको भगवानले मात्र अब जोगाउन सक्छन्... मंगलबार, कात्तिक १८, २०७७
बासी भातले सुधारिएको जिन्दगी कान्छा आज सोच्दै छन। सधैँ लिएर जाने बासी भातले उनको जीवनमा थोरै नै भएपनि सुधार ल्याएको छ। बूढी आमालाई औषधि किन्ने पैसा जोहो गर्न सके... मंगलबार, कात्तिक १८, २०७७
चित्रबहादुर केसीको दसैं सम्झना- केटाकेटीमा लट्ठे पिङबाट लडें यो दशैं लागेपछि अचम्म हुन्थ्यो। अरु एघार महिना खासै वास्ता हुँदैनथ्यो तर असोज लागेपछि खुब चुरोट पिउन मन लाग्थ्यो। अनि असोज एक महिना... शनिबार, कात्तिक ८, २०७७
महामारीविरुद्धको हाम्रो लडाईं राजनीति स्वार्थहरूको टकरावसँग सम्बन्धित छैन यस महामारी विरुद्धको हाम्रो लडाईं राजनीति वा अन्य स्वार्थहरुको टकरावसँग सम्बन्धित छैन र हुनुहुँदैन। कोरोना भाइरसजस्तो अदृश्य साझा शत... शुक्रबार, कात्तिक ७, २०७७